UHomerun: Ubunye ku-KDE | Kusuka kuLinux
Abanye onjiniyela be-KDE benze iphrojekthi ebizwa nge-Launcher UHomerun, ukukhiqiza kabusha ukusebenza kwe Unity noma imisebenzi ye-GNOME ku KDE.
Ngenxa kaHomerun kungenzeka ukuthi udlulise amehlo kuzinhlelo zokusebenza ezifakiwe bese uziqala noma uzingeze ohlwini lwezintandokazi futhi uzifinyelele ngokushesha ekhasini lasekhaya.
IHomerun ibuye ibhale izindawo / amafolda wethu owathandayo futhi ikuvumela ukuthi uwaphequlule. Ukuchofoza entweni engxenyeni ethi "Izindawo eziyizintandokazi" kuzoba uhlu lokuqukethwe yile folda. Ngakho-ke sizokwazi ukuzulazula kumafolda ukuvula idokhumenti ngaphandle kokusebenzisa umphathi wefayela.
Ikhaya: izinhlelo zethu zokusebenza namafolda
Izicelo: izinhlelo ezihlelwe ngezigaba.
Imibhalo: amafolda nemibhalo esanda kusetshenziswa
Amandla: kusuka lapha singashintsha umsebenzisi, sicishe, siqale kabusha noma sicishe ikhompyutha.
i-sudo engeza-apt-repository ppa: iblue-shell / homerun
sudo apt-get ukufaka i-homerun
En Arch kanye nokuphuma kokunye:
i-yaourt -S kdeplasma-applets-homerun
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » UHomerun: Ubunye ku-KDE
Ngiyifakile ngokuzenzakalela ku-Netrunner kepha angazi ukuthi kungani ngiqala uhlelo; uma ngiyithinta okokuqala ingiphendulela kwideskithophu yesibili, kufanele ngivale futhi ngivule ideskithophu yokuqala bese ingaphinde iyinikeze leyo nkinga. Yimiphi imibono?
Umbono wami mayelana nokubukeka nokuzizwa kweLibreoffice